कर्णालीको हिम्मत, सङ्घीयताको सार
नयाँ वर्ष २०७५ का दिन मैले कर्णालीका एक प्रतिनिधि लिलराज रोकायाले बोलेको कुरो समाचारमा पढेँ– राज्यले ध्यान दिने हो भने कर्णालीसँग नेपाल पाल्ने क्षमता छ । ’ असाध्यै खुशी लाग्यो मलाई । आजभन्दा दश वर्ष अघि फिनल्याण्डको भ्रमणमा, नेपाललाई चिन्ने र माया गर्ने एकजना महिलाले मलाई भनेकी थिइन्– नेपालका नेता र मन्त्रीसँग कुनै भिजन छैन । हुन्थ्यो भने तिनले कर्णाली अञ्चललाई यति हेला होचो गर्ने थिएनन् । कर्णालीसँग आधा नेपाल पाल्ने क्षमता छ ।
म त्यतिबेला नेता थिएँ । मन्त्री पनि थिएँ । तर उनको गाली मलाई मिठो लाग्यो । उनले भनेकी थिइन्, ‘अरु केही गर्न नसके पनि कर्णालीका जनतालाई सबैखाले जडीबुटीको खेती गर्न देऊ अनि उनीहरूको आफ्नो परम्परागत उत्पादन चिनोलाई मुख्य खाना बनाउने काम त गर । दाताले राम्रो चामल दिन्छ भन्ने नठान । सबैले दिने भनेको उभ्रिएको र कुहिएको चामल हो । त्यस्तो चामल बाँडेर कर्णालीलाई नमार । ’
फिनल्याण्डबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मैले ती महिलाले दिएको जानकारी र सुझावको कुरा सुनाएँ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया सकारात्मक रह्यो । त्यसको लगतै क्याम्पस भवनको उद्घाटन गर्न म सिधै जुम्ला गएँ । शिक्षामन्त्री थिएँ त्यतिबेला । स्वागत सम्मान हुने नै भयो । मैले भने, ‘म चामलको भात खान्न, मलाई चिनोको भात बनाउन लगाइदिनु होला । ’
तर चिनो त तिनले पनि बिर्सिसकेका रहेछन् । स्व. डिल्ली महतले भन्नुभयो, ‘कमरेड चिनो त यता पाउन छोडियो । उता सिँजातिर पुग्नु पर्छ । ’ दिक्क लाग्यो । मैले उहाँलाई पनि फिनल्याण्डको अनुभव सुनाएँ । उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘तपाईं मन्त्री, कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन । गहुँ राम्रै पाइन्छ । आज बेलुका गहुँको रोटी खाऊँन । ’ मैले गहुँको रोटीसँग सम्झौता गरे ।
चिनोलाई कर्णालीको अज्ञानताले मार्दै लगेको रहेछ । त्यहाँका जान्ने बुझ्नेले प्रयत्न गर्ने हो भने चिनो कर्णालीको प्रमुख खाद्यान्न हुन सक्छ । लिलराज रोकायो टिप्पणी पढेपछि मैले कर्णालीको उज्यालो अनुहार देख्न थालेको छु ।
किनभने उहाँले भनेको कुरो सत्य हो । सङ्घीय वा प्रादेशिक सरकारले बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने कर्णाली आपूm बाँच्ने मात्र होइन, सिङ्गो नेपाल नभए पनि आधा नेपाल पाल्ने क्षमता राख्दछ । त्यति मात्र होइन, कर्णालीलगायत कुहिएको चामल बाँडेर जनताको आयु घटाउने क्षेत्रमा चिनो खेती गर्ने काममा
स्थानीय सरकारले जनतालाई परिचालन गर्ने हो भने कर्णाली समृद्ध प्रदेशको अंग हुनेछ । के छैन कर्णालीसँग ? नेपालको सबैभन्दा पुरानो बस्ती हो कर्णाली । आजभन्दा छ हजार वर्ष अगाडि मानसरोबरबाट दक्षिण लागेका खसहरू नै नेपालका मूल आदिवासी हुन् । ती आदिवासी खस त्यसको साढे दुई हजार वर्षपछि पश्चिम दक्षिणबाट आएका वैदिक सभ्यतासँग एकाकार भएको हुनाले नेपालको खस पहिचान अन्योलमा परेको हो । तर पनि पछि इरानबाट आएका वैदिक आर्यसँग समागम भएका खसहरूले नेपालको संस्कृति निर्माणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । शक्तिशाली किराँत शिवलाई तिनले नै नेपालको सिमाना कटाएर भारतसम्म पु¥याएका हुन् । ती खस हुँदैनथे भने हाम्रा किराँत सरदार ‘देवाधिदेव महादेव’ हुन सक्दैनथे ।
मैले सुनेको कुरो ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको छर्को एक वर्षपछि जुम्ला पुगेको थियो रे । तर अहिले काठमाडौँ, झापा र जुम्लामा एकै समयमा समाचार सार्वजनिक हुन्छन् । त्यसैले कतिपय प्रदेश नाम र राजधानीको रनाहामा परिरहँदा कर्णाली प्रदेशले त्यो झमेला पार गरेर आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिको रेखा समेत खिचिसकेको छ ।
आफ्नो काम आफैँले गर्ने हो । अर्काले त उसको स्वार्थ सहितको सहयोग गर्छ । सरकारी र गैरसरकारी जे जस्ता संस्था भए पनि तिनले व्यापार गर्ने हो । चिनो, कमै नेपालीलाई थाहा भएको अत्यन्तै पौष्टिक खाना हो । चामल उसै पनि चिनोको बराबरी आउन सक्दैन । उसमाथि कुहिएको चामल । कर्णालीको कुपोषणको कारण त्यही चामल हुन पनि बेर छैन । अध्ययन अनुसन्धान नगरी निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । तर शंका गर्न सकिन्छ । किनभने पुँजीवाद आम जनताको स्वास्थ्यसँग सकारात्मक सोच राख्ने प्रणाली होइन ।
कर्णालीसँग के छैन ? सबथोक छ ।
स्वास्थ्यकर स्याउ छ । चिनो छ । फापर र जुनेलो पनि होला । मकै पक्कै छ । बोक्रा नछोडाइ खान मिल्ने आलु छ । भैंसीदेखि बोकासम्मका जनाबर छन् । मासु र दूधमा कर्णाली आत्मनिर्भर हुने सबै सम्भावना छन् । आफ्ना परम्परागत खाद्यान्नलाई सम्मान गर्ने हो भने कर्णालीले खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुने क्षमता बोकेको छ ।
छ त केवल प्रतिबद्धताको अभाव ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता चाहियो । काठमाडाँै धाइरहनुको कुनै आवश्यकता छैन । सङ्घीयताको सुन्दरता भनेको यही हो । यहाँनेर ती फिनिस महिलाले भनेको अर्को सन्दर्भ पनि सम्झनामा आयो मेरो । उनले भनेकी थिइन्, ‘तिमी शिक्षा मन्त्री । तर तिमीहरूको शिक्षा प्रणाली नै काम नलाग्ने छ । प्रवेशिका परीक्षा पास गरेका केटाकेटीलाई गोबर छुन घिन लाग्छ । स्नातक भएका युवा युवतीका लागि गाउँको बसाइ मन नपर्ने
बाध्यता हुन्छ । काम गरेर खाने मान्छे बाटोको किनारमा क्यारेम खेलेर बस्छन् । नेपालमा काम गर्न लाज मान्नेहरू विदेशमा ट्वाइलेट सफा गर्छन् । अर्काले खाएका जुठा भाँडा माझ्छन् । ’
पहिलो पल्ट गाउँ विकास समितिमा सिधै बजेट पठाउँदा नेकपा एमालेको सरकारले एउटा नारा पनि सँगै पठाएको थियो– आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ । आजको सङ्घीय सरकारले दिने नारा पनि यही हो– बजेट पाउनुहुन्छ, तर आफ्नो गाउँको विकास आफैँ गर्नुपर्छ ।
हिउँ पर्ने मुलुक हो फिनल्याण्ड । तर त्यो विश्वको धनी मुलुक मध्यमा माथिल्लै श्रेणीमा पर्छ । ती फिनिश महिलाले मलाई यसो पनि भनेकी थिइन्, ‘तिमीहरूको मुलुकमा जन्मिएको भए हामी संसारको सबैभन्दा धनी मानिस हुन्थ्यौँ । तिमीहरूको जस्तो सुन्दर मनोरम हावापानी र प्रकृति अन्त पाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हिमाल तिमीहरूको पर्यटनको आधार हो । पहाडमा तिमीहरू जडीबुटी र कन्दमूलको खेती गर्न सक्छौँ । तराई त उसै पनि राम्रो चामल र गहुँ उत्पादन गर्ने जमिन हो ।
नगरी खान पाइँदैन । यो अन्तिम सत्य हो । प्रत्येक व्यक्तिमा आफैँ कमाएर खान्छु भन्ने अठोट हुनुपर्छ । एम.ए. पास गरेकाहरूले अमेरिकामा दिनभरि उभिइरहनु पर्ने ‘वान डलर शप’ मा काम गरेको भेटेको छु मैले । उनीहरूको कुनै इज्जत पनि हुँदैन त्यहाँ । तर नेपालको कुनै पनि भूभागमा बसेर ‘वान डलर शप’ को भन्दा आधा मात्रै मिहिनेत गरे पनि नेपालीले अमेरिकामा कमाउने भन्दा बढी
कमाउँछ । त्यो पनि सम्मान सहित ।
तर काम गर्न लजाउनु भएन । अहिलेको हाम्रो शिक्षा नोकर बनाउने शिक्षा प्रणाली हो । यसलाई पूरै खारेज गरेर विद्यार्थीलाई मालिक
बनाउने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । चिटिक्क परेका सेता ‘ड्रेस’ लाएका प्राविधिक विद्यार्थीले भेटेनरी पढे पनि गोबर छुन मान्दैनन् । यो हाम्रो हाइफाईवाला समाजको दुःख लाग्दो तस्वीर हो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू प्रविधि मैत्री होऊन् । कृषिमा आजभोलि साना ठूला ट्य्राक्टरले खेतबारी जोत्ने चलन आएको छ । विदेशबाट फर्किएर आएका नेपालीले गाई, कुखुरा पालन गरेर आय आर्जन गरेको देखिएकै छ । त्यसैले प्रण गरौँ – हामी आफ्नै उत्पादन खाएर बाँच्छौँ । हामी हाम्रो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, सम्पन्न बनाएर केन्द्रीय सरकारलाई लेभी पनि बुझाउँछौँ ।